ခွေးပေါက်စများ - ခွေးများကမ္ဘာ Dogs World (စာမျက်နှာ 2)
သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါခွေးကလေးခွေးများ၏အခြေခံစောင့်ရှောက်မှုကိုရှာဖွေပါ၊ ၎င်းသည်ကျန်းမာကြီးထွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်ပထမ ဦး ဆုံးလမ်းညွှန်ချက်များ။
Doberman ခွေးငယ်လေးနှင့်တွေ့ဆုံပြီး၎င်း၏ကြီးမားသောဉာဏ်ရည်၊ သစ္စာရှိမှုနှင့်သစ္စာရှိမှုတို့ကြောင့်လူသိများသည်။
ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့လမ်းလျှောက်တာဘယ်လောက်ကြာမလဲ? သငျသညျ furry မွေးစားလျှင်, ရိုက်ထည့်ပါနှင့်ဤအရေးကြီးသောမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
ငါ့ခွေးကလေးနေမကောင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုမွေးစားရုံသာမက၎င်းကိုကောင်းစွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုပါကဝင်ပါ၊ ၎င်းကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
သင့်ခွေးသည်အစာစားပြီးနောက်အော့အန်သွားပါသလား။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများနှင့်အကြောင်းရင်းများကိုသင်သိလိုပါသလား။ အထဲ ဝင်၍ ထွက်ရှာပါ။
ခွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသိထားရမလဲ။ သငျသညျတ ဦး တည်းချမှတ်ရန်စဉ်းစားလျှင်, ဝင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤ furry သူမြားအတှကျသင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
သင့်ခွေးကလေးအားပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပါ။ သူထွက်သွားသည့်အခါရောဂါကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုရှောင်ပါ။ ခွေးများသည်မည်သည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သနည်း။ ရှာတွေ့သည်!
သငျသညျကောင်းသောဇာတ်ကောင်နှင့်အတူတက်ကြွသောခွေးကိုရှာဖွေနေလျှင်, Beagle ခွေးကလေးsurelyကန်အမှန်သင်ရှာနေသည့်ခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကသူတို့ကိုမှန်ကန်စွာပညာပေးဖို့ဘယ်လိုသိရမည်ဖြစ်သည်။
ခွေးပေါက်စများ၌စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးသောအလေ့အကျင့်များထဲမှတစ်ခုမှာသူတို့ကစားနေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကအနည်းငယ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူက fix နိုင်ပါတယ်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များသည်အတွင်းပိုင်းကပ်ပါးကောင်များအတွက်အလွန်အားနည်းနေသည်။ ၀ င်ပါ။ ခွေးငယ်များတွင်ပိုးကောင်များကိုကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပါ။
ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သင်၏မိသားစုကိုချဲ့ထွင်ရန်သင်ကြိုးစားနေပါသလား။ အကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ရိုက်ထည့်ပြီးသင်လုပ်ရမည့်အဆင့်များကိုရှာဖွေပါ။
သင့်ခွေးရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်လိုချင်ပါသလား ကျွန်ုပ်၏ခွေး၏ခွေးများကိုမည်သို့ရနိုင်မည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်ပါကသင်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုသိရန် ၀ င်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ခွေးမပါတဲ့ဘဝကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်လား။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်စရာအကောင်းဆုံးခွေးကလေးဗီဒီယိုတွေကိုဝေမျှချင်ပါတယ်။ သင်၏နေ့ရက်သည်သူတို့ကိုမြင်ပြီးနောက်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်!
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအကြားအတူတကွနေထိုင်ခြင်းသည်ရောက်ရှိလာသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအချို့ရှိပါသည်။
ခွေးသည်လူငယ်နှင့်လူကြီးများအတွက်အနှစ်သက်ဆုံးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏မိသားစု ၀ င်အသစ်ကိုမိတ်ဆက်မည်ဆိုပါကဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာသင့်သည်။
သင်ဟာ furry ခွေးတစ်ကောင်ကိုဝယ်လိုက်ပြီးခွေးတွေကဘယ်တော့မှကိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချင်လား။ သင့်ကိုကိုက်တာကိုရပ်တန့်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အိမ်၌ခွေးကလေးရောက်ရှိလာခြင်း - လိုက်နာရန်အဆင့်များ
ငါ့ခွေးအိမ်မှာဘာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူသက်သာစေတာလဲ။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်ကိုအများဆုံးမေးသည့်မေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမှာငါ့အဖြေပါ ...
မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းလေးကဝမ်းနည်းနေပုံရသလား။ တကယ်လို့အဲဒီလိုဖြစ်ရင်ဝင်ပါ၊ ခွေးတစ်ကောင်ကိုပြန်ပြီးစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ငိုနေတာကိုဘယ်လိုအေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်ရှင်းပြမလဲဆိုတာရှင်းပြပါမယ်။
မင်းမှာမွေးခါစသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသလား၊ ငါ့ခွေးကလေးကိုဘယ်တော့လမ်းလျှောက်ရမလဲလို့သင်စဉ်းစားနေသလား? သို့ဆိုလျှင်သင်စတင်ချိန်းတွေ့ချိန်ကိုရှာဖွေပါ။
မွေးကင်းစခွေးတစ်ကောင်ကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်နည်း။ စိတ်မပူပါနှင့်။ ထည့်ပါ။ ကလေးငယ်သည်ရှေ့ဆက်နိုင်ရန်သင်သိသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြပါမည်။
တစ် ဦး leash အပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့ဘယ်လိုခွေးသင်ယူဖို့ဘယ်လို
သင်၌ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ရှိပါသလား၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ခွေးကိုစပြီးရေချိုးရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ၀ င်လာကြပါ။
ဘယ်အချိန်မှာခွေးကလေးကိုသူ့အမေနဲ့ခွဲထားချင်တာလဲ။ မင်းမှာခွေးတစ်ကောင်ရှိနေဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့အဲဒါကိုဘယ်လိုမွေးစားရမလဲမသိဘူးလား။ ဝင်!
ခွေးကောင်လေးတွေကအရာရာကိုဝါးဝါးချင်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေသူတို့မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုဝါးစားတတ်ကြတယ်။ ၀ င်လာပြီးငါ့ခွေးကလေးကိုသူကိုက်မကိုက်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာပြောပြမယ်။
ခွေးပေါက်စများ ၀ မ်းလျှော ၀ မ်းနည်းခြင်းအလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့်သင်ပိုမိုသောဘေးဆိုးများကိုရှောင်ရှားရန်အကြောင်းရင်းများကိုသိပြီးလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
ခွေးတွေအားလုံးဟာကမ္ဘာကြီးကိုသွားကြည့်ချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်အငယ်ဆုံးကော။ ခွေးတစ်ကောင်ကိုဘယ်လိုအန္တရာယ်ကင်းစွာလမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုတာ ၀ င်ပြီးရှာဖွေပါ။
ခွေးတစ်ကောင်သည်ပညာရေးကိုရန်လိုခြင်းမရှိဘဲလူကြီးဘ ၀ တွင်မည်သို့ပေါင်းသင်းရမည်ကိုမသိဘဲကောင်းသောအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်စွာကြီးထွားရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစကားတစ်ခုပြောဖို့ခွေးတွေကသူတို့ငိုတာကိုသုံးတယ်။ သို့သော်သူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ပြုလုပ်ကြသနည်း။ ခွေးတစ်ကောင်ကိုငိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။
သင်၏မိသားစုသည်တိုးပွားလာပြီးသင်အိမ်ပြန်ရောက်လာသောခွေးတစ်ကောင်ကိုမည်သို့ပြုမူဆက်ဆံရမည်ကိုသင်မသိပါသလော။ စိတ်မပူပါနှင့်။ ရိုက်ထည့်ပါ၊ သင်မည်သည့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ Biting ခွေးကလေးရပ်တန့်ရန်သိကောင်းစရာများ